पाँचथरमा घर फर्कँदै गरेका वृद्धको मृ’त्यु, खानेपानी अ’वरुद्ध ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचार समाजपाँचथरमा घर फर्कँदै गरेका वृद्धको मृ’त्यु, खानेपानी अ’वरुद्ध !
पाँचथरमा घर फर्कँदै गरेका वृद्धको मृ’त्यु, खानेपानी अ’वरुद्ध !
पाँचथर- पाँचथर सदरमुकाम फिदिम बजार आएर घर फर्कँदै गरेका फिदिम नगरपालिका– ११ सेजेपाका ८२ वर्षीय हरिप्रसाद श्रेष्ठको मृ’त्यु भएको छ । आइतबार बेलुका आफन्तकोमा वास ब’सेर बिहान घर जान भनी हिँडेका उनको सेजेवा भि’रमा झ’रेको ढुंगाले लागेर मृ’त्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको पाँचथर प्रहरी प्रमुख सिद्धराज न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘श्रेष्ठको टाउकोमा चो’ट देखिन्छ । टोपीसमेत का’टिएको अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘घ’टनाको अवस्था हेर्दा माथिबाट ढुंगा झ’रेर लागेको हुन सक्ने देखिन्छ ।’घ’टनाका विषयमा थप अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
श्रेष्ठको श’व पो’स्टमार्टमका लागि सदरमुकाम ल्याइँदै छ । सेजेपा क्षेत्रमा गएरातिको पानीले बाढी आउँदा विद्युत् आ’योजनामा पनि क्ष’ति भएको छ । सेजेपा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन रातिदेखि नै ब’न्द भएको छ । फेमे खोला साना जलविद्युत् आयोजना, बिके हाइड्रोपावरका दुई आयोजना गरी तीनवटा आयोजनामा क्ष’ति पुऱ्याएको फेमे खोला साना जलविद्युत् आयोजनाका श्याम अधिकारीले जानकारी दिए । क्ष’ति भएका आयोजनामध्ये फेमे खोला साना जलविद्युत् आयोजना नाै सय ९८ किलोवाट र बिके हाइड्रोपावरका एक सय ५० र २ सय ४० किलोवाट उत्पादन ब’न्द भएको उनले जानकारी दिए ।
फेमे खोला आसपास लगाइएको धानबालीमा समेत बाढीले क्ष’ति पुऱ्याएको छ । क्ष’तिको यकिन विवरण भने आउन बाँकी छ ।क्ष’तिको यकिन विवरण आइनसकेको भए पनि आयोजनाका लागि निर्माण भएका करिब ७० मिटर पाइपलाइन, क’ज्वेलगायतका संरचना बगाएको छ । त्यसैगरी गएरातिको वर्षाले पहिरो ख’स्दा फिदिममा वितरण भइरहेको खानेपानी ब’न्द भएको छ ।फिदिम खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गर्दै आएको रानीटार लुङरुपा मुहान सोमबार बिहानबाट ब’न्द भएको हो ।